Labaatanka Gimbood ma Maalin Farxadbaa Mise Waa Maalin Murugo? – Rasaasa News
xusuusnow hurgumada 20 Gimbood, waa Maalintii ay Tirgreegu Itobiya Qabsatay, waa maalintii uu mugdiga galay xaqa Somalida Ogadeeniya!
Jijiga – Ogadeeniya [May 27, 2009] – Diyaargaraw xooggan ayaa ka soconaya guud ahaan in Dalka Itoobiya iyadoo maalinta barri ah ay tahay maalin ay aad u weyneeyaan Tigreeggu oo ku aadan maalintii ay xoogga ku qabsadeen dalka Itoobiya isla markaana ay yimaaddeen waa maalintii cadaadiska iyo Guumaysiga laga xoroobay.
Shucuubta ku nool dalka Itoobiya ayaa guud ahaan lagu qasbay in ay xusaan maalintan oo ay Taariikhda Itoobiya tahay 20 Gimbood, Shacabka Soomaalida Ogadeeniya ee la guumaysto ayaa ka mid ah Shucuubta sida daran loo gumaysto. Waxaana khasab lagaga dhigay in ay xusaan maalintan madaw oo ah maalinta ay Tigreeggu qabsadeen dalka.
Haddaba, Maalintaas darteed ayay Ciidamada Booliska Deegaanku xalay ilaa maanta baadhitaano xooggan ka wadeen magaalada Jigjiga, iyada oo la baadhayay baabuurta iyo dadka lugaynayaba, waxayna baadhayaan bal in ay helaan dad ay uga shaki qabaan in maalintaas ay rabshado dhaliyaan.
Maalintan Madaw oo ku aadan maalinta barri ah ayaa ilaa galabta ilaa Caawa waxaa aad loo adkaynayaa ammaanka magaalooyinka waaweyn gaar ahaan magaaladda Jigjiga oo ay il gooni ah ku hayaan gumaysigu iyada oo laga yaabo in Caawa fiidkii laga bilaabo bandaw lagu soo rogo magaalada, barri subaxdiina dadka Xaafadaha magaalada Jigjiga dhammaan lagu qasbo inay xusaan maalintan madaw oo ay isugu yimaaddaan fagaaraha ay Tigreeggu isugu keenayaan Shacabka.
Barri hadduu Alle idmo baynu ka war sugaynaa siday xaaladdu noqoto anaga oo idinla socodsiin doona sida looga xuso maalintan madaw magaalada Jigjiga iyo guud ahaan magaalooyinka uu Deegaanku ka kooban yahay, waxaana dadka lagu amraa maalintan in ay xidhaan dhamaanba ganacsiga.